Wararka Maanta: Jimco, Dec 7 , 2018-Aabbe Gabdhahiisa dilay oo kasoo muuqday maxkamad ku taalla Kenya
John Maina Wang’ombe, ayaa mar keliya cadaadis uu kaga sameeyay luqunta iyo xabadka qudha kaga jaray, Angel Wanja iyo Grace Wangui, oo da’dooda lagu kala sheegay Lix jir iyo Afar jir, xilli uu sarqaansanaa.
"Waa run in aan Gabdhaheyga laayay, waan sarkhaamay , waanan garwaaqsaday dembiga aan galay". ayuu yiri, John Maina Wang’ombe isagoo marka ku qeyliyay ereyo qoomamo iyo caro leh oo uu ka dhex sheegay Maxkamadda dhexdeeda.
Xilliga uu shilkan dhacayay ayaa la sheegayaa in Hooyadood ay ku maqnayd shaqo, markaas oo uu Gabdhaha u sheegay inuu siinayo Cambe, balse markii dambe ku dilay Guriga dhexdiisa, sida ay wargeyska Daily Nation u xaqiijiyeen dadka deriska la ahaa Mr, Wang’ombe.
Garsooraha Maxkamadda, Diana Mochache, ayaa ammartay in dambiilahan Xabsiga lagu hayo muddo toddobaad ah, si loo hubiyo xaaladdiisa loona dhammaystiro kiiskan uu Gabdhaha ku laayay.